ခြာလီ မကျနေး စီနီယာအသငျးကို ရောကျလာနိုငျမလား?
February 24, 2021 author one Articles 0
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ယူ- ၂၃ အသငျးအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ အဲဗာတနျအသငျး ယူ -၂၃ အသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ အဆိုပါ ပှဲစဉျက လူငယျတိုကျစဈမှူး ခြာလီ မကျနေး အတှကျ အမှတျရစရာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျ ကွယျပှငျ့ကစားသမားဟာ ယူ -၁၈ အသငျးနဲ့ အတူ ခွစှေမျးပွ ကစားနိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အဆိုပါ ပှဲစဉျမှာ ယူ – ၂၃ အသငျးအတှကျ ပထမဆုံး အကွိမျ ကစားခှငျ့ရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မကျနေးဟာ ယူနိုကျတကျက ( ၃ – ၁ ) ရှုံးနိမျ့နခြေိနျ ပှဲပွီးဆုံးဖို့ မိနဈ ( ၂၀ ) အလိုမှာ ဂြိုး ဟူဂေးနရော လူစားဝငျ ကစားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
သူ့အနနေဲ့ ယူ – ၁၈ အသငျးအတှကျ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ အသငျးဟောငျး မနျစီးတီးအသငျးကို ( ၄ ) ဂိုး သှငျးယူနိုငျခဲ့တာ အပါအဝငျ ဒီရာသီ စုစုပေါငျး ( ၁၂ ) ဂိုး ရယူပေးထားပါတယျ။ ယူ – ၁၈ အသငျးက ယခုတပတျအတှငျး ပှဲကစားဖို့ မရှိတဲ့အတှကျ မကျနေးကို ယူ – ၂၃ အသငျးနဲ့ ပူးပေါငျးစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အပွောငျးအရှေ့ ကာလအတှငျး မနျစီးတီးလူငယျအသငျးကနေ ပေါငျ ( ၈ ) သိနျးနဲ့ ယူနိုကျတကျကို ရောကျရှိလာတဲ့ မကျနေးဟာ တောကျပလာမယျ့ ကွယျပှငျ့ ကစားသမား အဖွဈ သတျမှတျခံထားရပွီး ပရိသတျတှအေနနေဲ့ စီနီယာ အသငျးကွီးမှာ မွငျတှခှေ့ငျ့ရဖို့ ဆန်ဒရှိနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ချာလီ မက်နေး စီနီယာအသင်းကို ရောက်လာနိုင်မလား?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ယူ- ၂၃ အသင်းအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဲဗာတန်အသင်း ယူ -၂၃ အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် အဆိုပါ ပွဲစဉ်က လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ချာလီ မက်နေး အတွက် အမှတ်ရစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဟာ ယူ -၁၈ အသင်းနဲ့ အတူ ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ယူ – ၂၃ အသင်းအတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် ကစားခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မက်နေးဟာ ယူနိုက်တက်က ( ၃ – ၁ ) ရှုံးနိမ့်နေချိန် ပွဲပြီးဆုံးဖို့ မိနစ် ( ၂၀ ) အလိုမှာ ဂျိုး ဟူဂေးနေရာ လူစားဝင် ကစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ယူ – ၁၈ အသင်းအတွက် နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အသင်းဟောင်း မန်စီးတီးအသင်းကို ( ၄ ) ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာ အပါအဝင် ဒီရာသီ စုစုပေါင်း ( ၁၂ ) ဂိုး ရယူပေးထားပါတယ်။
ယူ – ၁၈ အသင်းက ယခုတပတ်အတွင်း ပွဲကစားဖို့ မရှိတဲ့အတွက် မက်နေးကို ယူ – ၂၃ အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွေ့ ကာလအတွင်း မန်စီးတီးလူငယ်အသင်းကနေ ပေါင် ( ၈ ) သိန်းနဲ့ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မက်နေးဟာ တောက်ပလာမယ့် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ စီနီယာ အသင်းကြီးမှာ မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီရျောနယျဒို ၊ မကျဆီတို့နောကျ တတိယနရောယူတဲ့ လီဝနျဒေါစကီး